Global Voices teny Malagasy » Shina: famonoan-tenan’ny mpianatra sangany iray hafa – ny tantaran’i Yang Yuanyuan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Aogositra 2020 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra Jennifer Zhang Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Vonjy Voina
Nirongatra ny famonoan-tena nataon'ny mpianatry ny oniversite Shinoa tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, indrindra ireo vao nahazo diplaoma sy dokotorà. Nahitana trangana famonoan-tena miisa 23 nataon'ny mpianatra  tao an-tanàndehiben'i Shanghai tamin'ny taona 2008 ka 19 no maty. Tany Guangdong ny taona 2008 ihany dia nisy trangana famonoan-tena miisa 26  ka 21 no maty. Inona no antony ao ambadik'ireny trangana famonoan-tena rehetra ireny ? Mety hanazava momba ny olana atrehan'ireo sangany eo amin'ny fiarahamonina ny raharaha Yang.
Araka ny tatitra avy amin'ny 163.com , avy amin'ny fianakaviana reny tokan-tena i Yang. Ny reniny no nitaiza azy sy ny anadahiny ary niasa mafy izy ireo mba hisondrotana teo amin'ny fiainana tamin'ny alàlan'ny fianarana- Tao Shanghai i Yang no naka ny mari-pahaizana Master ary tao amin'ny Oniversite Peking ny anadahiny no naka ny mari-pahaizana dokotorà. Hatramin'ny nanesorana ny renin'i Yang tao amin'ny orinasa dia nijanona niaraka tamin'ny zanany vavy tany amin'ny trano fatorian'ny mpianatra tao amin'ny Oniversite Wuhan izy izay nanombohany ny fianarany. Niasa nandritra ny roa taona izy mba hamerenany ny trosa rehetra alohan'ny nanapahany hevitra hanohy ny fianarany amin'ny fakana diplaoma tany Shanghai. Tamin'ny vola kely voaangony no nangatahany fandriana iray fanampiny ho an'ny reniny tao amin'ny trano fatorian'ny mpianatra saingy nihomehezana izy ireo noho izy ireo avy any ambanivohitra. Nolavin'ilay mpiambina mihitsy aza ny fidiran'ny renin'i Yanga tao amin'ny efitra fatorian'ny mpianatra.
Nahazo fanehoan-kevitra maro be tao amin'ny Aterineto ny fahafatesan'i Yang satria nanjary nihasarotra ho an'ny olona manana mari-pahaizana amin'ny ambaratonga ambony ny mahazo sata ara-tsosialy izay niadin'izy ireo mafy. Nanjavona ny fahagagan'ny diplaoman'ny oniversite. Ilay bilaogera Hailing izay nitsetra an'i Yang dia niresaka momba ny elanelana misy eo amin'ny zava-bita eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny karama ao amin'ny fiarahamonina Shinoa tao amin'ny lahatsoratra nosoratany hoe iza no tokony handray andraikitra momba ny fahafatesan'ilay mpianatra nahazo diplaoma Yang Yuanyuan?  :
Bilaogera maro no nanameloka ny tsy fahampian'ny fangoraham-po eo amin'ny fiarahamonina. Ho valin'ny vaovao, nanamarika i  netizen (123.232.*.*) fa:
Nizara hevitra mitovy amin'izany i SHI Sansheng  ary nanakiana ny kolontsaina Konfiosianisma mihatsaravelatsihy  :
Mazava tokoa fa tsy anjorombala eo amin'ny fiarahamonina toy ny mpiasa mpifindramonina na ny tantsaha ny olona manana mari-pahaizana ambony. Mampametra-panontaniana ny antony mahatonga ny olona nahita fianarana tena marefo ara-psikôlôjia? Namaritra ny voina hita taratra amin'ny rafi-pampianarana tsy mahomby sy ny fanabeazan'ny fianakaviana i REN Haiyong . Hoy izy ao amin'ny bilaogin-dahatsorany , “Ny fanehoam-pitiavana telo tsy hita”  :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/08/149046/
 trangana famonoan-tena miisa 23 nataon'ny mpianatra: http://big5.eastday.com:82/gate/big5/xwwb.eastday.com/eastday/xwkd/x/20090422/u1a563920.html
 trangana famonoan-tena miisa 26: http://visions-reborn.blogspot.com/2009/10/blog-post_2799.html
 iza no tokony handray andraikitra momba ny fahafatesan'ilay mpianatra nahazo diplaoma Yang Yuanyuan?: http://www.blogchina.com/20091211859581.html
 nanamarika i: http://news.163.com/09/1212/10/5QAUQ5200001124J.html
 SHI Sansheng: http://iwanshi.vip.bokee.com
 kolontsaina Konfiosianisma mihatsaravelatsihy: http://www.blogchina.com/20091211859562.html
 REN Haiyong: http://renhaiyong.vip.bokee.com